Yeremiya 4 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
4 “Ukuba uthe wabuya, Sirayeli,” utsho uYehova, “wabuyela kum.+ Yaye ukuba uthe wazisusa izinto zakho ezilizothe ngenxa yam,+ uya kwandula ke ungahambi njengembacu. 2 Kwaye ukuba ngokuqinisekileyo uthe wafunga wathi,+ ‘Ephila nje uYehova enyanisweni,+ kokusesikweni nangobulungisa!’+ ziya kwandula ke okunene zizisikelele ngaye iintlanga, zize ziqhayise ngaye.”+ 3 Kuba utsho uYehova kuwo amadoda akwaYuda nakuyo iYerusalem ukuthi: “Zilimeleni umhlaba olimekayo, ningahlwayeli phakathi kwameva.+ 4 Zaluseleni kuYehova, nize nisuse amajwabi eentliziyo zenu,+ nina madoda akwaYuda nabemi baseYerusalem; ukuze umsindo wam ungaphumi kanye njengomlilo, uze uvuthe ngokuqinisekileyo kungekho bani ongawucimayo, ngenxa yobubi bezenzo zenu.”+ 5 Xelani kwaYuda, nivakalise naseYerusalem,+ yitshoni ngokuvakalayo, nivuthele nesigodlo kulo lonke ilizwe.+ Memezani kakhulu nithi: “Hlanganisanani, kwaye masingene ezixekweni ezinqatyisiweyo.+ 6 Phakamisani umqondiso ngaseZiyon. Yenzani ilungiselelo lekhusi. Musani ukuma ngxi.” Kuba ndizisa intlekele ivela ngasemntla,+ ukuwa okukhulu. 7 Unyuke njengengonyama iphuma entshinyeleni yayo,+ yaye lowo wonakalisa iintlanga undulukile;+ uphumile endaweni yakhe ukuze enze ilizwe lakho libe yinto ekhwankqisayo. Izixeko zakho ziya kuwa zibe ngamanxuwa, zingabi nabemi.+ 8 Ngenxa yoku bhinqani amarhonya.+ Zibetheni izifuba nize nibhomboloze,+ ngenxa yokuba ukuvutha komsindo kaYehova akubuyanga kuthi.+ 9 “Kuya kuthi ke ngaloo mini,” utsho uYehova, “intliziyo kakumkani itshabalale,+ kwanentliziyo yeenkosana; yaye ngokuqinisekileyo ababingeleli baya kukhwankqiswa, nabaprofeti baya kuthi manga.”+ 10 Ndaza ndathi: “Awu, Nkosi enguMongami Yehova! Eneneni usikhohlise ngokupheleleyo esi sizwana+ neYerusalem, usithi, ‘Niya kuba noxolo,’+ ukanti ikrele lide lafikelela emphefumlweni.” 11 Ngelo xesha kuya kuthiwa kwesi sizwana nakuyo iYerusalem: “Umoya olulophu womendo ohanjwe kakhulu entlango+ usendleleni eya kwintombi yabantu bam;+ asingowokwela, ungenguwo nowokucoca. 12 Umoya ovuthuza ngamandla uvela kuwo usiza kum. Ke kaloku nam ndiya kuyithetha kubo imigwebo yam.+ 13 Khangela! Uya kunyuka njengamafu emvula, neenqwelo zakhe zinjengomoya osisaqhwithi.+ Amahashe akhe anamendu ngakumbi kuneenkozi.+ Yeha ke thina, ngenxa yokuba siphangiwe! 14 Yihlambe ihlambuluke ebubini intliziyo yakho, Yerusalem, ukuze usindiswe.+ Kuya kude kube nini na iingcamango zakho zesiphoso zihleli ngaphakathi kwakho?+ 15 Kuba ilizwi liyaxela liphuma kwaDan+ kwaye livakalisa into eyenzakalisayo ivela kummandla weentaba wakwaEfrayim.+ 16 Kukhankanyeni oku, ewe, ezintlangeni. Kuvakaliseni nxamnye neYerusalem.” “Abalindi bavela kwilizwe elikude,+ yaye baya kulikhupha ilizwi labo nxamnye nazo kanye izixeko zakwaYuda. 17 Njengabalindi basendle baye banxamnye nayo macala onke,+ ngenxa yokuba iye yavukela nxamnye nam,”+ utsho uYehova. 18 “Indlela yakho nezenzo zakho—ziya kubuyiselwa kuwe.+ Yintlekele le ikufikelayo, kuba ikrakra; ngenxa yokuba ifikelele entliziyweni yakho.” 19 Owu mathumbu am, mathumbu am! Ndineentlungu eziqatha ezingontsini zentliziyo yam.+ Intliziyo yam iyaxokozela ngaphakathi.+ Andinako ukuthi cwaka, kuba umphefumlo wam usivile isandi sesigodlo, ukuhlatywa komkhosi wemfazwe.+ 20 Kumenyezwa ukuwa phezu kokuwa, kuba ilizwe liphela liphangiwe.+ Ngequbuliso iintente zam ziphangiwe,+ ngephanyazo amalaphu eentente zam akasekho. 21 Kuya kude kube nini na ndibona umqondiso, ndisiva isandi sesigodlo?+ 22 Kuba abantu bam bazizidenge.+ Mna abandiqondanga.+ Bangoonyana abangalumkanga; yaye abanako ukuqonda.+ Bazizilumko zokwenza okubi, kodwa ukwenza okulungileyo kona okunene abakwazi.+ 23 Ndalibona ilizwe lingenanto kwaye liyinkangala;+ nasemazulwini, kwakungasekho ukukhanya kwawo.+ 24 Ndazibona iintaba zinyikima, neenduli zonke zagungqiswa.+ 25 Ndabona kungekho mntu wasemhlabeni, nezidalwa eziphaphazelayo zasemazulwini zazisabile zonke.+ 26 Ndabona ibhoma liyintlango, izixeko zalo zichithiwe zonke.+ Oku kwakungenxa kaYehova, ngenxa yokuvutha komsindo wakhe. 27 Kuba utsho uYehova ukuthi: “Ilizwe liphela liya kuba yinkangala ephanzileyo,+ kwaye andiyi kulitshabalalisa ngokupheleleyo na?+ 28 Ngenxa yoko ilizwe liya kuzila,+ namazulu phezulu ngokuqinisekileyo aya kuba mnyama.+ Oku kungenxa yokuba ndithethile, ndicingile, yaye andizisolanga, ndingayi kuguquka kuko.+ 29 Ngenxa yesandi sabakhweli-mahashe nabatoli bezaphetha isixeko siphela siyabaleka.+ Bangene ezintshinyeleni, banyuka baya nasemaweni.+ Zonke izixeko zishiyiwe, kwaye akukho mntu uhlala kuzo.” 30 Ekubeni ngoku uphangiwe, yintoni na oya kuyenza, ekubeni wawufudula usambatha ezingqombela, ekubeni wawufudula uzivathisa ngezihombo zegolide, ekubeni wawufudula uwenza makhulu amehlo akho ngesithambiso esimnyama?+ Kwakulilize ukufudula uzenza mhle kwakho.+ Abo bakukhanukayo bakugatyile; bafuna umphefumlo wakho kanye.+ 31 Kuba ndive ilizwi elinjengelomfazi ogulayo, ukubandezeleka okunjengoko komfazi ozala umntwana wakhe wokuqala,+ ilizwi lentombi yaseZiyon emana ibefunyeka. Yolula izandla zayo, isithi:+ “Yeha ke kum, kuba umphefumlo wam udiniwe ngababulali!”+